Soro anyị: Nzaghachi COVID-19 Africa - AfricaArXiv
Sonyere anyi: Nzaghachi COVID-19 Africa
bipụtara AfricArXiv & ndị mmekọ on 16th April 2020 16th April 2020
Ndị otu si AfricaArXiv sonyere na ndị otu a na - emekọrịta ihe Koodu maka Afrika, Vilsquare, Network Sayensị Afrịka, TCC Africa, na Sayensị 4 Africa n'etiti ndị ọzọ ịchịkọta ihe site na mpaghara sayensị na mpaghara lekwasịrị Africa anya.
Biko sonyere anyị na ngwaọrụ dijitalụ na ụzọ nkwukọrịta a:
Slack, ebe anyị na-akparịta ụka na nzukọ obodo: (sonye na njikọ njikọ)
Trello, dashboard anyị, maka ọrụ anyị niile
COVID-19 Africa reply boardsonye na njikọ njikọ)
AfricanArXiv bọọdụ obodo maka ihe eji akọwa ihe omimi (sonye ebe a)
Na webụsaịtị AfricanArXiv, ị ga - ahụ ọwa obodo ndị ọzọ ị nwere ike isonyere: africarxiv.org/contact/
Ndị a bụ isi ihe ole na ole na-amalite banyere otu ị nwere ike isi rụọ ọrụ:
Soro usoro ikpo okwu dị n’elu wee kwado ozi ịntanetị gị
Mgbe gị na Trello bara, ị nwere ike itinye onwe gị ma ọ bụ tinye ya na bọọdụ na kaadị ndị dị mkpa maka ọrụ ị họọrọ n'oge ndebanye ahụ.
Nwere onwe gị ịgagharị mbadamba na kaadị ahụ dị na Trello iji sonyere bọọdụ na kaadị ndị ịchọrọ. (Inwere ike ijikọ ihe karịrị otu bọọdụ ma ọ bụ kaadị)
Soro mkparịta ụka ahụ na Slack / AfricaArXiv iji kesaa echiche, akụrụngwa, maka Q&A na iji kwurịta ma mee atụmatụ n'ihu. Ga - ahụ ọwa a na-akpọ # covid19-africa nzaghachi maka mkparịta ụka dị omimi, ị ga - esonye n'otu ọwa ndị ọzọ Slack.
Ọ bụrụ na ị bụ onye dị ọhụrụ na Slack ị nwere ike mụta otu esi eji ya ebe a: youtube.com/watch?v=9RJZMSsH7-g
Ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na Trello, ị ga-amụta otu esi eji ya ebe a: youtu.be/xky48zyL9iA
Ewezuga mkparịta ụka na Slack na Trello, anyị ga-enwe oku ndị ime obodo kwa izu ga-eme ka anyị nọrọ na-ezukọ ma na-atụle / ịtụle ọrụ na usoro. Ime ụlọ anyị Jit.si dị na zute.jit.si/AfricArXiv (ọ bụrụ na nke a daa, anyị nwekwara ike ịkwaga na Zoom).
Oku ndi mbu n’azu ga abia echi bu FraideNaanị jụọ ajụjụ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma biko tinye echiche gị, nchegbu gị, na aro gị.
Categories:	Njikọ AkaCovid-19Nkwukọrịta Sayensị